Uncategorized @zu | Haiside
You are here: Home / Izindaba / Uncategorized @zu
2021-09-15 /in Uncategorized @zu /by admin
Izinqubo zokusebenza zokuphepha kwesikrini sokudlidliza samanzi aphezulu kufanele zijwayele inqubo yokuhamba nokulawulwa kwemishini kohlelo ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile nokulungiswa okujwayelekile. Isikrini esidlidlizelayo kufanele silungiswe kabusha kanye ngonyaka, futhi izingxenye zonke kufanele zihlolwe ngokucophelela, futhi izingxenye ezidingekayo kufanele zihlolwe ngokucophelela. Thola ukufakwa esikhundleni okufika ngesikhathi. Ezinye izinqubo zokusebenza zokuphepha ezinikezwe ngumenzi wesikrini esidlidlizelayo, ngiyethemba kuzoba wusizo kuwo wonke umuntu.
Imiyalo yokusebenza okuphephile kwesikrini sokudlidliza semvamisa ephezulu
1. Kufanele ujwayelane nebanga lokusetshenziswa kanye nemingcele yokusebenza kobuchwepheshe bemishini.
2. Kuyadingeka ukuthi ube nokuqonda okwanele nokuphatha isakhiwo, umgomo kanye nomqondo ovamile wokugcinwa kwemishini.
3. Ujwayele inqubo yokuhamba nokulawulwa kwemishini yalolu hlelo.
Ukuhlolwa ngaphambi kokuqala kwesikrini sokudlidliza imvamisa ephezulu
1. Hlola indawo ezungeze okokusebenza ukuqinisekisa ukuthi abekho abantu ababhajwe ukugwema ukulimala komuntu lapho beqala.
2. Landela ukulandelana kohlelo lwenqubo ukuqinisekisa ukuthi isikrini esingenalutho siyaqalwa futhi yonke imishini yokuphepha isesimweni esiphephile nesisebenzisekayo.
3. Hlola ukuthi okhethwayo bokudla nokhipha okhethwayo ngaphansi kwesikrini bavuliwe yini.
4. Hlola ukuthi ipuleti yesihlungo namabhawodi obuhlalu akakhululekile yini, nokuthi ukugqokwa kwepuleti yesihlungo akuvumelekile yini.
5. Hlola ukuthi ingabe i-V-belt kanye neshidi eliguquguqukayo liqinile yini, ukuthi ukuqina kufanelekile yini, ukuthi kukhona yini ukulimala, uma kukhona, ukukufaka esikhundleni sako ngesikhathi.
6. Hlola ukuxhumana kwejoyinti lendawo yonke kanye nebhawodi yokuxhuma kwepuleti lengcindezi yenguquko, nokuthi intwasahlobo yenjoloba yonakele yini.
7. Isikrini esidlidlizelayo kufanele siqaliswe ngaphandle komthwalo, futhi okokusebenza kungondliwa kuphela ngemuva kokuthi i-amplitude izinzile.
Izinto ezidinga ukunakwa ekusebenzeni kwesikrini sokudlikiza kwamanzi emvamisa ephezulu
1. Naka ukuhlola ukusatshalaliswa kwezinto esibukweni bese wenza izinguquko ezifanele uma kunesidingo ukuqinisekisa ukusatshalaliswa okufanayo kwezinto zokwakha esikrinini.
2. Bheka ukuthi imvamisa yokudlidliza kanye ne-amplitude yesikrini esidlidlizayo akujwayelekile yini; ukuthi umsebenzi uzinzile yini.
3. Hlola izinga lokushisa kwemoto, isivuseleli sokudlidliza, nesihlalo esithwala igiya.
4. Hlola ukudamba kokudlidliza kwentwasahlobo yenjoloba.
5. Bheka ukuthi awukho yini umsindo ongajwayelekile njengokushayisana noma ukungqongqoza ngesikhathi sokusebenza kwesikrini esidlidlizayo. Uma itholakala, kufanele imiswe ngesikhathi.
Izixwayiso zokuma kwesikrini sokumisa imvamisa ephezulu
1. Kunoma ikuphi, inqobo nje uma kwenzeka ingozi enkulu yomuntu nezinto zokusebenza, okokusebenza kufanele kumiswe ngaphambi kokuxhumana negumbi lokulawula elenziwe maphakathi nezikhundla ezihlobene nalo.
2. Ezimweni ezijwayelekile, ukulandelwa kohlelo lwenqubo kufanele kulandelwe. Isikrini esidlidlizelayo kufanele simiswe ngaphandle komthwalo, futhi akufanele simiswe ngezinto zokwakha.
3. Bhekisisa ukujija kwe-amplitude enkulu lapho upaka izimoto ukuqinisekisa ukuphepha kwemishini, futhi khumbula ukulandela imithetho ephephile yokusebenza kwesikrini sokudlidliza esinemvamisa ephezulu.
1. Ngesikhathi sokufakwa nokunakekelwa kwe-exciter, akumele kube khona ukungqongqoza kanzima noma ezinye izehlakalo, ukuqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwangempela kokusekela kokushintshana akukwazi ukushintshana; ubukhulu nobuningi be-eccentric block noma i-counterweight plate enamathiselwe ebhlokini ye-eccentric kufanele ifane, futhi inkomba ye-radial yokuthwala Ukususwa kufanele kube ileveli ye-C3.
2. Ukuxhuma kwejoyinti lendawo yonke kanye nama-exciters ezinhlangothini zombili kufanele kube okugxilile, amabhlogo e-eccentric ezinhlangothini zombili asendaweni ye-plumb yamahhala, amabhawodi wokuhlanganisa jikelele angahlangana ngokushelela; uma kukhona ukuchezuka ngesikhathi sokufakwa, hlola ukuhlangana kwendawo yonke Ukuthi amalunga omabili womkhawulo agxilile yini, ungashushi i-engeli yebhulokhi eccentric ukufakwa.
3. Isikrini esidlidlizelayo kufanele sifakwe ngemithombo enokuqina okufanayo. Ukuqina kwentwasahlobo ezinhlangothini zombili zokuphela kokondla nokuphela kokukhipha kufanele kube ngokungaguquguquki ngangokunokwenzeka, futhi umehluko wokuphakama ovumelekile akufanele weqe u-3mm.
4. Zombili izinhlangothi zesihlalo sokusekela somthombo wenjoloba wesikrini esidlidlizayo kufanele zibe sendizeni efanayo evundlile enephutha phakathi kuka-2-4mm ukuqinisekisa ukuthi okokusebenza esikrinini kuthuthuka ngokulinganayo.
5. Imithethonqubo yokusebenza kwezokuphepha kwesikrini sokudlikiza semvamisa ephezulu igcizelela ukuthi ngemuva kokufaka esikhundleni sebhande lokudlulisa, kuyadingeka ukuthi kubhekwe kabusha ukuthi ngabe izindawo ezingaphandle zamapulleys amabili zisendizeni eyodwa enezingqimba yini.
6. Uma usebenzisa i-welding kagesi ukufaka noma ukuqaqa izingxenye, ucingo lwaphansi kufanele lulungiswe ngqo endaweni yokusebenza ehlanganisiwe, futhi liseduze ngangokunokwenzeka endaweni yokushisela, futhi i-welding yamanje akumele idlule kunoma yimaphi amabheringi noma amalunga.
7. Empeleni, izinqubo zokusebenza zokuphepha kwezikrini zokudlidliza kakhulu azivunyelwe ukufakwa kuma-plate plate. Uma izingxenye zidinga ukuxhumeka ngokuya ngemvelo yamanje, kufanele zixhunywe ngamabhawodi ngemuva kokumba izimbobo emapuleti ohlangothini.
8. Ngemuva kokuphothulwa kabusha kuqediwe noma kufakwe ezinye izinto zikagesi, i-steering kufanele ihlolwe ukuqinisekisa ukusetshenziswa nokuphepha kwesikrini esidlidlizayo.
9. Ngemuva kokulungiswa kwemishini, okujabulisayo kufanele kuphendulwe ngesandla, kuthi ishafula enkulu ijikeleze ngokuguquguqukayo ngaphandle kokushayisana nokuxubana.
10. Ngaphansi kwezimo zokusebenza ezijwayelekile, izinga lokushisa lokuthwala akufanele leqe ama-degree angama-45.
11. I-amplitude ephezulu kakhulu yesikrini esidlidlizelayo lapho isiqalwa futhi imiswa iphindwe ka-5 kunokujwayelekile, futhi akufanele yeqe izikhathi eziyi-8 noma ngabe inkulu kangakanani.
12. Ukuhlanganiswa kwendawo yonke kufanele kube okugxile, futhi kufakwe isixhobo esivikelayo ukuvimbela ukwephuka nokulimala.
1. Njalo hlola izingxenye zokuxhuma zebhawodi ngayinye. Kumele iqine futhi ithembeke, futhi wonke amabhawodi akumele akhululeke.
2. Hlola njalo ukuguga kwepuleti yesihlungo.
3. Hlola izingcwecwe ezisemaceleni nemishayo yesikrini esidlidlizayo kanye ngenyanga.
4. Hlola njalo iziphethu zenjoloba, amabhande e-V, izingcezu zokuxhuma eziguquguqukayo kanye nokuhlangana kwendawo yonke.
5. Gcoba iphoyinti ngalinye lokuthambisa bese ushintsha uwoyela wokuthambisa ngokuya ngezidingo zemishini.
6. Isidlidlizi sihlelwa kabusha kanye ngonyaka, zonke izidlidlizi ziyasuswa ukuze zihlanzwe futhi ziguqulwe uwoyela, amabheringi ahlolwe ngokucophelela ngawodwana, futhi angashintshwa uma kunesidingo, futhi izinqubo zokusebenza eziphephile zesikrini sokudlidliza esinemvamisa ephezulu zifakwa ngekhanda ukuze gwema ukulahleka kwezomnotho okungenasidingo.
2021-09-08 /in Uncategorized @zu /by admin
Izikrini zokudlidliza zisetshenziswa enqubweni yokukhiqiza yezimboni zezimayini, zamakhemikhali, zensimbi nezinye izimboni. Kuyimishini yokuhlunga nokuhlela. Ukusebenza kokuhlolwa kwesikrini esidlidlizelayo kubhekisa kunani lomkhiqizo ngaphansi kwesikrini kunani eliphelele lezinto ezikhethiwe. Izici ezithinta ukusebenza kahle kokuhlolwa kwesikrini esidlidlizelayo zifaka izici ezibonakalayo, amapharamitha wesakhiwo sesikrini esidlidlizayo, nemingcele yokunyakaza. Ngemuva kokuqonda lezi zinto ezinethonya, ungafunda kusuka kulokhu Kuhlobo lokuthi ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kokuhlola kwesikrini esidlidlizelayo, le nkinga iyahlaziywa.
1. Ukukhetha okunengqondo kwesikrini sokudlidliza
Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokuhlolwa kwesikrini esidlidlizayo, isikrini esidlidlizelayo kufanele sikhethwe ngokufanele ngokuya ngezidingo zesiza. Izinhlobo ezahlukahlukene zesikrini esidlidlizayo zinokuguquguquka okuhlukile ezintweni ezingena esikrinini, futhi amafomu wokunyakaza kokuhlolwa kwezinto ezinhlobonhlobo zezikrini zokudlidliza nakho kwehlukile. Okuqukethwe kudlidlizisiwe ebusweni besixwayisi esiqondisweni esicishe sifane nobuso besikrini, nomphumela wokuhlola uyanda njengoba imvamisa yokudlidliza kwesikrini esidlidlizayo inyuka. Ngakho-ke, lapho kukhethwa isikrini esidlidlizelayo, ukuhlaziywa okuphelele kwezici ezahlukahlukene ezinjengezinto ezibonakalayo zesayithi kanye nemikhiqizo ekhonjiwe kufanele kwenziwe, futhi kufanele kukhethwe isikrini esidlidlizayo esizwakalayo ukukhulisa umphumela wokuhlola.
Ngasikhathi sinye, ngesisekelo sokuhlangabezana nezidingo zosayizi wezinhlayiyana zomkhiqizo, zama ukukhetha indawo engeyona yensimbi enosayizi omkhulu we-sieve nezinga lokuvula eliphezulu, bese ukhetha isisefo esifanele ukwenza ngcono umphumela wokuhlola okokusebenza. Ngasikhathi sinye, lapho kukhethwa ubuso besikrini, kuyadingeka ukwanelisa ukuthi indawo yesikrini inesilinganiselo esilinganiselayo, esingathuthukisa ukusebenza kwesikrini esidlidlizayo ngaphandle kokuthinta amandla wokuhlola.
2. Lungisa imodi yokudla
Uma okuphakelayo kunganele ngesikhathi senqubo yokuhlola, i-ore izokwabiwa ngokungalingani esikrinini; uma okuphakelayo kukhulu kakhulu, isikrini sizoba sikhulu kakhulu, okuholele ekukhiqizeni okukhulu, kuvimbe isikrini futhi kunciphise ukuphuma. Ngenkinga yokuphakelwa okungalingani, kungafakwa umsabalalisi ethekwini lokuphakela ukuze asabalalise ngokulinganayo okwenziwe ebusweni besikrini ukuhlangabezana nezidingo zokwenza okukhiphayo. Abasabalalisi bangafakwa ukuqinisekisa ukondliwa okufanayo. Uma umsabalalisi engezwa ngaphandle kwemibandela, kufanele kunakekelwe lapho kudingeka ukuphakelwa ngesandla ukuze kuqinisekiswe ukuthi kudliwa ngendlela efanayo. Ukondla kufanele kwenziwe kulo lonke ububanzi besikrini ukuze kusetshenziswe ngokuphelele indawo yesikrini.
3.Khetha ngokufanelekile imoto yokudlidliza futhi ulungise amandla okuzijabulisa
(1) Ukukhetha okunengqondo kwemoto yokudlidliza
Njengomthombo wokudlidliza wesikrini esidlidlizayo, imoto ihlobene kakhulu nokusebenza kokusebenza, imodi yokunyakaza nomphumela wokuhlola wesikrini esidlidlizayo. Lapho ukhetha isidlidlizi sesikrini semoto, khetha imoto enesakhiwo esilula, ukusebenza kahle kokudlidliza okuphezulu, nokunakekelwa okulula. Ukwandisa amandla entokozo yemoto kungakhulisa ukuphakama kobuso besikrini, kusheshise ukuhamba kwento, futhi kunciphise izinga lokuvimba lomgodi wesikrini.
(2) Lungisa amandla athokozisayo
Izinga lokungena elinamandla nezinto ezibonakalayo nesilinganiso sokuchoboza kukhombisa ushintsho lwe-wavy ngezinga elithile, ngakho-ke amandla athokozisayo angalungiswa ngokufanele ngaphakathi kwebanga elithile, kepha inani lokubeka lamandla athokozisayo kufanele libe ngaphakathi kwebanga lamandla ahehayo wemoto, Ngaphandle kwalokho kulula ukudala ukushayisana kwempahla nokonakala kwemoto. Izinyathelo ezahlukahlukene kufanele zithathwe lapho kulungiswa amandla ezokuzijabulisa.
4. Thuthukisa ukuhamba kobuso besikrini
Imodi yokunyakaza kwesikrini inethonya elikhulu ekusebenzeni kahle kwesikrini esidlidlizayo. Indlela ekahle yokunyakaza komhlaba ngesihlungo yile:
(1) I-amplitude eqondile ekugcineni kokuphakelayo kwendawo yesikrini kufanele ibe nkulu kune-amplitude mpo ekugcineni kokukhipha. Lokhu kungenxa yokuthi i-amplitude enkulu eqondile ekugcineni kokuphakelayo ingazihlukanisa kahle izinto ezimbaxa ekugcineni, futhi ngasikhathi sinye, ngosizo lwe-angle yokuthambekela, okokusebenza okweqile ekugcineni lokhu kusakazeka ngokushesha kuze kube maphakathi kwesikrini umphezulu, ukuze izinto ezihlelwe kahle zinciphe. Isendlalelo sezinto sihlukaniswe ngesikrini, ngaleyo ndlela sithuthukise ukusebenza kahle kwangempela kwesikrini; lapho okokusebenza kufinyelela ekugcineni kokukhishwa, okokusebenza kuhlukaniswe kwaba izingqimba, khona-ke kudingeka kuphela i-amplitude encane mpo ukuze kuqinisekiswe okokusebenza okugaywe kahle Kunezimo ezinhle ezingena ngaphakathi, kepha ubukhulu obukhulu kakhulu mpo buphazamisa imvelo engenayo yokuhluza okuhle izinto zokwakha.
(2) Ngokuhambisana nobude besikrini, kusuka ekugcineni kokudla, isivinini sokuhamba kwendaba kufanele sibe sesimweni esinciphayo. Lokhu kungenxa yokuthi ijubane elihambayo lezinto liyancipha, ukuze ungqimba lwezinto ezibonakalayo lungagcina ukujiya okuthile kuyo yonke indawo yesikrini, ukuze okokusebenza okuhlelwe kahle kungabekwa esikrinini ebangeni elide ngokwengeziwe lesikrini, ukwandisa indawo yangempela yokusetshenziswa kwesikrini, futhi ngasikhathi sinye, Inani lokungena kwesikrini ngobude besikrini livame ukufana, linikeze ukudlala okugcwele emandleni okungena kwesikrini.
5. Idizayini enengqondo yemingcele yokudlidliza
Ngokuya ngezinto ezihlukile, amapharamitha wokudlidliza wesikrini esidlidlizelayo aklanyelwe ngokufanelekile ukwenza ngcono izinga lokuphonsa lesikrini esidlidlizayo. Okokusebenza okunezinhlayiya ezinkudlwana, kungasetshenziswa izikrini zokudlidliza imvamisa ephansi, futhi ezintweni ezigaywe kahle, kusetshenziswa izikrini zokudlidliza ezincane, izikrini zokudlidliza kakhulu. Ngaphansi kwesisekelo sokuhlangana nomphumela wokuhlola, i-engeli yokuqondiswa kokudlidliza kwesikrini sokudlidliza ingancishiswa ngokufanele. , Khulisa ngokufanele i-angle yokuthambekela yendawo yesikrini esidlidlizayo, enenzuzo yokuthuthukisa ukusebenza kahle kokuhlolwa kwempahla.
6. Ukusetshenziswa kwesikrini se-non-metallic material
Ukusetshenziswa kwesikrini esincane esinwebeka njengoba isisekelo sesikrini sizuzisa kakhulu ukwenza ngcono ukusebenza kwesikrini esidlidlizayo. Lolu hlobo lwesikrini ngokuvamile lwenziwe ngezinto zenjoloba noma ze-polyurethane. Kunganciphisa ukunamathela phakathi kobuso besikrini nezinto ezihluzwayo, kubangele ukuthi okokusebenza kukhiqize ukudlidliza kwemvamisa ephezulu yesibili, kugweme ukuvinjelwa komgodi wesikrini, futhi kuthuthukise ukungena kwempahla. Kunganciphisa umthelela wokusebenza kwento okufanele ihlolwe ebusweni besikrini, futhi ingamelana nokudlidliza okukhulu kwe-amplitude kunesikrini sensimbi sensimbi.
Lokhu okungenhla kuyimpendulo yokuthi ungayithuthukisa kanjani ukusebenza kahle kokuhlolwa kwesikrini esidlidlizayo, esingathuthukiswa ngokukhetha okunengqondo kwesikrini esidlidlizayo, ukulungiswa kwemodi yokuphakelayo, ukukhetha okunengqondo kwemoto edlidlizayo nokulungiswa kwamandla athokozisayo. Ukwenza ngcono ukusebenza kahle kokuhlola kwesikrini esidlidlizelayo kulungele ukuthuthukisa isivuno somkhiqizo jikelele, futhi kunomthelela obalulekile ekusebenzeni okulandelayo.
2021-08-30 /in Uncategorized @zu /by admin
Eminyakeni yamuva nje, ngokuthuthuka kwezinga lesayensi nobuchwepheshe, ukufunwa kwabantu kwempahla kuye kwahlanjululwa ngokwengeziwe, futhi ikhwalithi iye yanda kakhulu. Ubuchwepheshe bezikrini zokudlidliza futhi bunezidingo eziphakeme embonini yokukhiqiza. Ngasikhathi sinye, ngokuthuthuka komnotho wezwe, i-screen Sub-technology nemishini sekuya kusetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene.
Emisebenzini yokulungiselela amalahle, izikrini eziningi ezidlidlizayo zisetshenziselwa ukuhlukanisa noma ukwehlisa amanzi emzimbeni. Ngasikhathi sinye, ukwenza ngcono ukunemba kwezinto, izikrini zokudlidliza zivame ukusetshenziselwa ukuhlukanisa izinto zazo. Embonini yamalahle, indima yezikrini zokudlidliza ayigcini nje ngokuhlukanisa, izikrini eziningi ezidlidlizelayo zisetshenziselwa ukwehlisa amanzi noma ukususa amalahle amalahle, kanye nokususa idilting. Emisebenzini yokuhlola isitshalo sokulungiselela amalahle, ukulungiswa kwamalahle okuluhlaza nokulungiswa komkhiqizo, ihlukaniswe kakhulu ngezigaba ezinhlanu.
1. Lungiselela i-sieving
Ebizwa nangokuthi ukuhlolwa kwangaphambili. Esitshalweni sokulungiselela amalahle, ngokuya ngezidingo zomsebenzi wokuchoboza nomsebenzi wokuhlunga, amalahle aluhlaza ahlolwe ngobukhulu bezinhlayiyana ezahlukahlukene ukulungiselela ukuqhubeka komsebenzi wamalahle.
2. Ukwehlisa amanzi nokuhlola
Ukuhlolisiswa ngenhloso yokwehlisa amanzi emzimbeni kusetshenziswa esitshalweni sokulungiselela amalahle ukomisa amanzi emikhiqizweni esetshenzisiwe. Isihlungo esisetshenziselwa umsebenzi wokwehlisa amanzi emzimbeni sibizwa ngokuthi yi-sieve yokwehla emzimbeni.
3. Desliming futhi screening
Ukuhlola ngenhloso yokususa i-slime. Ukudiliza nokuhlola ukusebenza kwesitshalo sokulungiselela amalahle ukuze kuncishiswe ukungcoliswa kwendle enhle yomlotha ukuze kuhlanzwe amalahle. Ngenkathi yokwehlisa amanzi ngesihlungo, ukuwashwa kwezindiza ziqiniswa ukususa ingxenye yodaka oluhle. Ukwehlisa nokuhlunga kusetshenziswa kakhulu ezitshalweni ezisetshenziselwa ukulungisa amalahle ezisindayo. Ukuze kuncishiswe ukungcola kwe-slime yamalahle ohlelweni lwezindaba, ukwehlisa nokuhlola kufanele kusetshenziswe ngaphambi kokuthi amalahle angene kusihlukanisi esinzima.
4. Ukuhlunga ngenhloso yokususa imidiya esindayo
Kubizwa nangokuthi ukuhlolwa kwe-de-intermediate. Kungumsebenzi osuselwa phakathi lapho kufafazwa khona umkhiqizo wamalahle anesisindo esiphakathi namanzi ahlanzekile aqinile ngesihlungo ukwehlukanisa umkhiqizo kusisindo esinzima.
5. Ukubuyiselwa kwesilayidi
Ihlolwe ngenhloso yokuthola i-slime yamalahle futhi isetshenziselwe ukunisela amanzi nge-slime yamalahle nangokusika ezitshalweni zokulungiselela amalahle.
2021-08-23 /in Uncategorized @zu /by admin
Njengoba igama lisho, isibuko sokudlidliza imvamisa ephezulu singanciphisa umswakama osetshenziswayo. Ngokuvamile, isetshenziswa kabanzi embonini yesihlabathi neyezimayini. Isihlabathi esihlanziwe bese sithunyelwa esikrinini sokususa amanzi ukuze siphelelwe amanzi emzimbeni, okunganciphisa okuqukethwe udaka esihlabathini kuye ezingeni elibekiwe. Isiqu. Njengamanje, inokusebenza okuhle ekuhlolweni nasekonakaleni kwesihlabathi esihle, futhi kudlala indima ebaluleke kakhulu. Kepha uma isikrini sokudlidliza semvamisa ephezulu singapheli emzimbeni ngokuphelele, kufanele senziwe kabusha futhi sizokhulisa umthwalo wokuhlola. Ngakho-ke siyini isizathu sokususwa kwamanzi okungaphelele kwesikrini sokudlidliza semvamisa ephezulu? Abenzi besikrini abadlidlizayo abalandelayo bazophendula lo mbuzo kuwo wonke umuntu.
Izizathu zokwehla kwamanzi emzimbeni okungaphelele kwesikrini sokudlidliza imvamisa ephezulu
Isikrini sokuhambisa amanzi asiqinisiwe, futhi nebhande lokudlulisa likhululekile kakhulu. Lezi zimo ezimbili ezingenhla kungenzeka zidale ukususwa kwamanzi okungaphelele, okungahambelani nenqubekela phambili ejwayelekile yomsebenzi wokuhlola, bese kuthinta ikhwalithi yokususa amanzi. Ngaphezu kwalokho, ukuvinjelwa kwesisefo esikrinini kubangela umthwalo owedlulele. Ngaphezu kwalokho, kuzodala nokuphela kwamanzi emzimbeni.
Isixazululo: Isikrini kufanele siqiniswe, nebhande lokudlulisa kufanele liqiniswe; indawo yesikrini kufanele ihlanzwe ngesikhathi.
2. Isendlalelo sezinto esibukweni siwugqinsi kakhulu
Isendlalelo sezinto ezijiyile ebusweni besikrini kungenzeka ukuthi singenxa yokuphakelwa okuningi, noma umgodi we-sieve oshiwo ngenhla uvinjiwe, okuzokwenza ukuthi ungqimba lokuphakelayo lube luqine kakhulu, bese isikrini sokuhambisa amanzi singasebenzi, ngakho-ke lokhu futhi kuyisizathu salowo osusa amanzi ngokuphelele. Yehlisa kakhulu ukusebenza kahle komshini wesikrini.
Isixazululo: Nciphisa okuphakelayo kwesikrini sokuhambisa amanzi.
3. Izizathu zosayizi wezinto ezibonakalayo
Izinto zesikrini sokudlidliza samanzi ngosayizi wezinhlayiyana ezincane kuno-3/4 wosayizi wemesh kulula ukuntshontsha ngesihlungo, futhi sibizwa ngokuthi yi-sieve elula; i-particle inkulu kuno-3/4 wesisefo, futhi kunzima ukudlula ngesihlungo. Isetshenziselwa i-slurry dehydration ekhethekile yamanzi amalahle wamanzi amalahle. Umphumela wesihlungo ubizwa ngokuthi izinhlayiya okunzima ukuzilinganisa; izinhlayiya ezinosayizi wezinhlayiyana eziphindwe ka-1-1.5 usayizi wemesh zibizwa ngokuthi izinhlayiya.
Isixazululo: Ukuhlolwa kuqukethe inani elikhulu lezinto ezinhle kakhulu zamamaki amahle, futhi izindlela zokuhlola ezisizayo zingangezwa. Isihlungo esisizayo esinosayizi omkhulu wemeshoni sisetshenziselwa ukuhlola kuqala ibanga lomkhiqizo ngesihlungo. Lapho isetshenziselwa ukuhlolwa, ukususwa kwamanzi nokususwa kokusebenza kwezinto ezincanyana, ubude bemishini yomshini wokuhlola ngokuvamile buba yi-5.6-7m, kanti isilinganiso sobude cishe siyi-3.
4. Ukondliwa okungalingani komshini we-sieve
Okuphakelayo okungalingani ngeke nje kubangele ukuqoqeka kwempahla nokuqhekeka, kepha okuphakelayo okuncane kakhulu kuzonciphisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi ukuqongelela okuningi kakhulu kuzodala ikhwalithi yokuhlola engemihle, futhi kubangele nokwehluleka kokusebenza kwemishini uma kubucayi.
Isixazululo: Ukondliwa komshini wesikrini kufanele kulungiswe ukuqinisekisa ukondliwa okufanayo.
5. Ezinye izizathu
(1) Izinga elingenhla lebhokisi lesikrini sokuhambisa amanzi lilungile. Isixazululo: lungisa ukuphakama kokusekelwa; shintsha i-angle yokuthambekela yebhokisi lesikrini ukukhulisa i-angle yokuthambekela;
(2) Intwasahlobo yokusekelwa kwensimbi kwesikrini sokuhambisa amanzi inkulu kakhulu noma yonakele. Isixazululo: Lungisa noma buyisela entwasahlobo yesikrini sokunisela.
Izinyathelo zokuqapha ukusetshenziswa kwesikrini sokudlikiza samanzi esisebenza kaningi
1.Naka ubushelelezi bokuthwala ngenkathi kusebenza imoto yokudlidliza kwesikrini sokuchelela. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza, isikhathi sokusebenza esinqwabelene cishe amahora angama-1600, igrisi ethwele kufanele ithathelwe indawo bese kuhlanjululwa ikamelo lokuthwala, kanye nendlala ethwele.
2. Ngemuva kokuthi isikrini sokuhambisa amanzi simisiwe noma sigcinwe isikhathi esingaphezu kwengxenye yonyaka, imoto kufanele ihlukaniswe ukuze inakekelwe bese kufakwa igrisi yokuthambisa.
3. Ngemuva kwesikhathi sokusebenza esinqwabelene kwesikrini sokuhambisa amanzi sidlula amahora angama-5000, ukuthwala kwemoto kufanele kuhlolwe. Uma ilimele, kufanele kufakwe okusha okusha.
4. Ngemuva kokuthi isibuko samanzi sipakwe isigamu sonyaka noma isikhathi eside, ukumelana nokuqina kwekhoyili ye-motor stator phansi kufanele kukalwe ngaphambi kokusetshenziswa. Lapho ulinganisa nge-megohmmeter engu-500V, ukumelana kokufakwa kungafanele kube ngaphansi kwama-megohms angama-20.
Lokhu okungenhla kuphendula umbuzo wokuthi siyini isizathu sokungapheleli kahle kwamanzi esikrinini esidlidliza kakhulu. Ngiyethemba ukuthi ingasiza wonke umuntu. Uma kunenkinga yokuphela kwamanzi emzimbeni ngesikhathi sokusetshenziswa kwangempela, ungalandela izizathu nezixazululo ezibalulwe ngenhla. Ukuhlola, uma ungazi ngempela, ungaxhumana nomenzi wesikrini odlidlizayo othengwe ngaleso sikhathi ngensizakalo yokuthengisa ngemuva.
2021-08-16 /in Uncategorized @zu /by admin
Njengengxenye ebalulekile yokuhlola yesikrini esidlidlizayo, isikrini sixhumana ngqo nezinto ngesikhathi senqubo yokuhlola, ngakho-ke isikrini siyingxenye esemngciphekweni omkhulu ohlelweni lwesikrini esidlidlizayo. Lapho okokusebenza kukhethwe ngokungalungile, kulula kakhulu ukwenza ukuthi isikrini sigqokwe futhi sonakaliswe, okuthinta ukukhiqizwa okujwayelekile futhi kukhuphule izindleko zokukhiqiza. Ngakho-ke, uma ufuna ukukhetha isikrini sokudlidliza esifanele, kufanele uqale uqonde izinto zesikrini esidlidliza esivame ukusetshenziswa.
Izinto zesikrini esidlidlizayo
1. Isikrini sensimbi engagqwali
Izinto zokwenziwa kwesikrini sensimbi ezingenasici ikakhulukazi ama-201, 201, 302, 304, 304L, 316, njll. amandla aphezulu, amandla okuqina, ukuqina nokugqoka ukumelana, ukuqina, nokumelana nokushisa okuphezulu kwe-oxidation. , 304 insimbi engagqwali screen nge lokushisa okuncane 800 ℃, 310S insimbi engagqwali screen nge lokushisa okuzisholo 1150 ℃; ukucutshungulwa okujwayelekile kokushisa, okungukuthi, ukucutshungulwa okulula kwepulasitiki, okwenza ukusetshenziswa kwesikrini sensimbi engagqwali kuhluke; ukuqeda okuphezulu, akukho ndawo Kuyinto elula futhi elula ukuphatha nokugcina. Izikrini zensimbi engagqwali zivame ukusetshenziselwa ukuhlunga nokuhlunga ngaphansi kwezimo zemvelo ze-asidi nezama-alkali, kanye nezikrini zodaka embonini kaphethiloli, nezikrini ezimbonini zamakhemikhali nezamakhemikhali ezimboni.
2. Isikrini sensimbi esiphezulu se-manganese
Phakathi kwezinto eziningi, ikhwalithi yesikrini sensimbi ephezulu ye-manganese ithembekile. Luhlobo lomkhiqizo wesikrini olukwe ngocingo lwe-manganese steel mesh ngobubanzi be-1.6mm-12mm. Yamukela indlela yokweluka efakiwe. Iphoyinti eligudlanayo le-warp ne-weft alivelanga. Ingaphezulu lesikrini liyisicaba futhi namandla alingana. Ubupulasitiki nobulukhuni bungazuza imiphumela engcono, kanti impilo yensizakalo iqinisekisiwe kakhulu. Insimbi ephezulu ye-manganese inamandla amakhulu, ukuqina namandla okuthwala. Lapho ubhekene nomthelela onamandla nokuhilizisana, ingaphezulu lizokhiqiza ukuqina komsebenzi okuqinile ngenxa yokuguquguquka kwepulasitiki, futhi ukuqina kobuso kungakhuphukela ngaphezulu kwe-HRC60, ngaleyo ndlela kutholwe ukumelana nokugqoka okuphezulu. , Ngenkathi ingaphakathi lisaqhubeka nokuqina kwepulasitiki nobulukhuni. Ngaphezu kwalokho, lapho indawo endala igugile, indawo entsha izokwakha ungqimba olungagqoki ukugqokwa, ngakho-ke impilo yensizakalo ingafinyelela izikhathi ezingama-4-8 kunezikrini ezijwayelekile. Isetshenziswa kakhulu ezimbonini ezinkulu zezimayini. Ingasetshenziswa futhi njengesikrini esivikelayo esikrinini sokudlidliza komshini, umshini wesikrini seDrum, umshini wesikrini semvamisa ephezulu kagesi nomshini wokuxuba i-asphalt, njll.
3. Ukubhoboza isikrini
Isibhakela esibhakabhakeni sisho esikrinini esisebenzisa isibhakela ukushaya iphethini yelitshe kupuleti elizocutshungulwa. Ngokuvamile, wenziwe ngensimbi engagqwali, ipuleti le-aluminium, ipuleti elibandayo nelishisayo lensimbi, ipuleti lethusi, ifilimu le-PVC nezinye izinto. Uhlobo lomgodi lukhetha ngokwengeziwe futhi lunemigodi emide, izimbobo eziyizikwele, izimbobo eziyindilinga, izimbobo ezinamacala ayisithupha, izimbobo zesikali, izimbobo ezimile okwehlisiwe, njll. Zijwayele ukusetshenziselwa imigoqo yokuvikela umsindo ekuvikeleni imvelo ezimotweni zomgwaqo nasezikhungweni zikamasipala, nezikrini zami, izikrini zemayini, izikrini ezimise okwe-I, njll.
4. Isikrini se-Polyurethane
Izikrini ze-Polyurethane nazo kulula ukuzisebenzisa futhi zinokumelana okungcono kokuhuzuka. I-Polyurethane uqobo inemodulus enwebeka kakhulu, amandla aphezulu kanye nokufakwa komthelela, ukumelana nokugqoka okuphezulu, namandla amakhulu okuqina, ngakho-ke amandla alo wokuthwala aphezulu kakhulu. Kuphindwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-2,5 kwezingcwecwe zesefa zenjoloba, futhi impilo yenkonzo yayo yinde ngokuphindwe kashumi nesishiyagalombili kunaleyo yamapuleti ezejwayelekile esisefo sensimbi, ephindwe kathathu eyesikrini sensimbi engagqwali, nezikhathi eziyi-3.9 zenjoloba yemvelo. Kuyinto yesikrini samanje esinokumelana okungcono kokugqoka. . Izinto zokukhiqiza zesikrini se-polyurethane yi-polymer elastomer ephilayo, enokumelana okuhle kakhulu kokuhuzuka, ukumelana nezimo namandla amakhulu wokuthwala umthwalo. Iphathwe ngokukhethekile ukuqinisekisa ukuthi ayisoze yangcola ngaphansi kwemithwalo yesikhathi eside eshintshanayo.
5. Isikrini sensimbi yeCarbon
Izikrini zokudlidliza ezenziwe nge-carbon steel azivamile. Yize zingabizi kakhulu futhi zinezinga elithile lokumelana nokugqwala, zinokumelana okuncane kokugqoka futhi azizinzile kakhulu kunensimbi engagqwali nezinto zensimbi. Inani le-nickel liphansi, impahla inzima, futhi kulula ukuyiphula, okwenza ukuthi isikrini sesikrini esidlidlizayo sonakaliswe ngokushesha okukhulu, ngakho-ke uhlelo lokusebenza lincane.
Ukukhethwa kwesikrini sokudlidliza
1. Khetha ngokuya ngezinto zokwakha
Okokuqala, kufanele ucacise ukuthi iyiphi impahla oyisindayo, futhi uma uthenga isikrini esidlidlizayo. Ngemuva kwalokho, ngokosayizi wezinhlayiya zezinto ezi-sieved, singakhetha i-sieve engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zami zokusikwa. Chaza imingcele yezobuchwepheshe yemeshi yesikrini, ububanzi bocingo, ukuvula, ububanzi, okokusebenza, indawo ebonakalayo yesikrini, njll. Iyunithi yobude imvamisa ingamamilimitha njengokujwayelekile.
2. Khetha ngokusho kokuqukethwe
Okuqukethwe kwesikrini esidlidlizayo okuningana kwethulwe ngenhla, futhi izici zento ngayinye nazo zichazwa ngokuningiliziwe. Phakathi kwezinto zensimbi, isikrini sensimbi esine-manganese ephezulu ikhwalithi engcono, kepha izindleko ziphakeme kakhulu. Phakathi kwezinto ezingezona ezensimbi, izikrini ze-polyurethane yizona okulula ukuzisebenzisa.
3. Khetha ngokusho kokugqoka ukumelana
Ngemuva kokucacisa izinto ezizohlolwa, bheka ukumelana kwesikrini. Ngoba izinto ezihlolwe yisikrini sokudlidliza kwezimayini zivame ukuba namandla aphezulu, noma kwezinye izimboni zamakhemikhali, izinto ezihloliwe ziyonakalisa, ngakho-ke isihenqo sesikrini esidlidlizayo siyadingeka ukuba sibe nezinga elithile lokumelana nokugqoka, uma kungenjalo isikrini Sithambekele ekuphukeni nezinga eliphezulu lokugqoka.
4. Khetha ngokuya ngesilinganiso sokuvula
Izinga lokuvula lisho isilinganiso sendawo ehlala izimbobo zesikrini endaweni ehlala indawo yesikrini. Lapho inkulu indawo yokuhlola esebenza ngempumelelo, kukhula umkhiqizo endaweni ngayinye yeyunithi yesikrini futhi kuphakama nokusebenza kahle kokuhlola; isilinganiso sokuvulwa kobuso besikrini Kuyipharamitha ebalulekile ukukala ikhwalithi yendawo yesikrini; kufanele kubhekwe ukunganciphisi amandla ebuso besikrini futhi kufinyeze ngokuphawulekayo impilo yesevisi yendawo yesikrini; ingaphezulu lesikrini sesikrini esidlidlizayo lisatshalaliswa ngokulinganayo ngemigodi yosayizi nobume obuthile, okuvame ukubizwa ngemigodi ye-sieve. ; Lapho kusikwa izinto ebusweni besikrini, izinto ezidlula emigodini yesihlungo zibizwa ngokuthi yimikhiqizo engaphansi kwesikrini, futhi izinto ezisele ebusweni besikrini zibizwa ngokuthi yimikhiqizo engaphezulu kwesikrini.
Izinyathelo zokufaka zesikrini esidlidlizayo
1. Ukukhethwa kwesikrini: Khetha isikrini esinenombolo efanayo yemeshi. Lokhu kubalulekile. Uma inombolo yemeshi yesikrini ingafani, izothinta ngqo ukunemba nokukhishwa kwezinto ezihloliwe;
2. Ukubeka isikrini: Lapho ufaka isikrini, isikrini kufanele sibekwe phansi ku-pallet, futhi isikrini kufanele sibhebhe ngangokunokwenzeka (kodwa singabi namandla kakhulu, ngaphandle kwalokho sizothinta impilo nokunemba kwesikrini), bese usebenzisa idivaysi yokubopha esikrinini iqondiswe ohlakeni lwenetha. Lapha ukuchaza: Ngokuvamile, ifreyimu yesikrini sokudlidliza ojikeleze kathathu ifreyimu yegridi yencwadi. I-mesh yesikrini ingacindezelwa kufreyimu womama ngomshini wokuqinisa. I-mesh yesikrini sokudlidliza se-ultrasonic inamathele ngqo kuhlaka lwemesh, futhi idinga kuphela ukuqiniswa nokunamathiselwa ngesikhathi sokufakwa;
3. Ukuqinisa: Ngemuva kokuthi isikrini siboshwe ohlakeni lomama, hlola ukuthi ngabe izikrini ezizungezile zonke zicindezelwe kuhlaka lomama. Uma ukuthamba kutholakala, kufanele kulungiswe ngokufanele;
4. Ukulungisa iphutha: Ngemuva kokufakwa kwesikrini sokudlidliza komugqa, kufanele kusetshenziswe into encane ukuhlola indwangu nokuhlolwa kwesikrini. Uma okokusebenza kuthuthwa ngendlela efanayo, futhi ukuhlukaniswa kunembile, akukho mkhuba wokuxubana, lapho-ke ungasetshenziswa; Ngokuphambene nalokho, uma kukhona ukungalingani okufana nokuphambuka noma ukunqwabelana, ubumnene nokufana kobuso besikrini kufanele kulungiswe; uma kunesimo sokuxuba, ukubekwa uphawu kwesikrini sokudlidliza komugqa nokuthi ngabe kucindezelwe kufanele kuhlolwe.
Izinyathelo zokuqapha zesikrini esidlidlizayo
1. Qaphela ukuthi kufanele ukhethe isikrini esinobubanzi obucijile bocingo, ngoba ukufakwa kwesikrini esihambisanayo kunzima kakhulu.
2. Uma usika, ububanzi besikrini kufanele bufane nohlaka lwenetha, futhi ubude kumele bube ngama-50 ~ 70mm ubude kunozimele wenetha.
3. Lapho ufaka, isikrini kufanele sishube, ngoba ukungezwani kwesikrini kuyinto ebalulekile ethinta ukusebenza kahle kokuhlolwa.
4. Lapho ufaka i-pinball ecacile yenetha, kufanele unake ubunzima bokuhlola okokusebenza nenombolo yama-meshes, futhi ayinakufakwa ngokungaboni.
5. Uma amandla adonsela phansi ento enkulu noma inombolo yemeshi yesikrini iphakeme, kufanele kufakwe umugqa ofanele wokusekela ngaphansi kwesikrini. Inhloso ukudlala indima esekelayo, ukunciphisa ukucindezela kwento esesibukweni, nokwelula impilo yenkonzo yayo. .
6. Ngemuva kokuthi ifreyimu enezikhala iqoqelwe ebhokisini lesikrini njengoba kudingeka, khumbula ukunweba isikrini esikhulile sibe yindawo ehambisanayo ukugwema ukuxubana.
7. Lapho ufaka ipuleti lengcindezi, qiniseka ukuthi unaka ubucwebecwebe bayo, bese uyifaka ngentambo yokuvala uphawu yesiponji eguquguqukayo ukuze uyikhiye ngokulinganayo, ngoba lokhu kuyisihluthulelo sokuvimbela ukuxubana nento ebalulekile ethinta impilo yenkonzo isibuko.
Lokhu okungenhla isingeniso sokwaziswa kwesikrini esidlidlizayo. Okokusebenza kwesikrini esidlidlizelayo yiphuzu abasebenzisi abaningi abagxila kulo lapho bekhetha isikrini esidlidlizayo. Lapho ukhetha isikrini, kufanele sisekelwe kuzimpawu zento. Isikrini asikwazi ukumelana nokugqoka. Inhlanganisela yokusebenza nezinga lokuvula liyakhethwa, ukuze isikrini esidlidlizelayo futhi sibe nokusebenza kahle kokuhlola.
2021-08-09 /in Uncategorized @zu /by admin
Isikrini esidlidlizayo ngokuvamile sinendawo yokusebenza enokhahlo, njengokushisa okuphezulu nothuli oluphakeme. Ukuze kugcinwe ukusebenza okujwayelekile kwesikrini esidlidlizayo ngaphansi kwalesi simo, kubeka phambili izidingo eziphakeme kunqubo yenqubo yesikrini esidlidlizayo. Amapharamitha wenqubo yesikrini esidlidlizelayo ayini? Ungayikhetha kanjani futhi uyibale le mingcele? Konke okudingeka sikuqonde. Amapharamitha wenqubo enengqondo angaphinde aqinisekise ukusebenza okujwayelekile kwesikrini esidlidlizayo, futhi kwezinye izindlela futhi kunweba impilo yesevisi yesikrini.
Inqubo nemingcele kwesikrini isixwayisi
1. I-angle yokuthambekela kwesikrini esidlidlizayo
I-engeli yokuthambekela kobuso besikrini isho i-engeli ephakathi kobuso besikrini sesikrini esidlidlizayo nolayini ovundlile. Usayizi we-angle yokuthambekela uzothinta ijubane elihambayo lezinto ezomisiwe. Lapho i-angle yokuthambekela kwendawo yesikrini inkulu kakhulu, isivinini sokuhamba sento naso sizokwenyuka. Yize ingakhuphula ivolumu yokukhiqiza, izokwehlisa ukusebenza kahle kokuhlolwa. Ngokuphambene nalokho, uma i-angle yokuthambekela incane kakhulu, ukusebenza kahle kokuhlola kuzokwandiswa, kepha amandla okukhiqiza azoncishiswa. Izikrini zomugqa ngokuvamile zifakwa ngokuvundlile nge-engela yokuthambekela okungu-zero. Izikrini eziqondile ezivundlile ngokuvamile zikulungele kuphela ukuhlolwa kwezinto ezinosayizi wezinhlayiyana ezingama-40mm noma ngaphansi, noma zokwehla kwamanzi emzimbeni, ukomisa nokususa amalahle. Uma isetshenziselwa ukuhlola izinto ngosayizi wezinhlayiyana ezingama-50mm noma ngaphezulu, isikrini esiqondile kufanele sibe ne-engeli, futhi i-angle yokuthambekela icishe ibe ngu-5º ~ 10º.
2. Isixwa amplitude yesikrini nobuningi
Ukudlidliza i-amplitude yesikrini kubhekisa ebangeni nasekuqineni kokudlidliza kwebhokisi, futhi imvamisa ibhekisa kwinani lokudlidliza ngeminithi yebhokisi lesikrini. Lapho ubukhulu bukhulu, imvamisa yokuhlola iphakeme, futhi ijubane lokuhamba nokusheshisa kwebhokisi lesikrini nakho kukhulu. Lapho kusikwa izinhlayiya ezigqwabayo, kunconywa ukwamukela ukuphakama okukhulu kanye nobuningi obuphansi; ngakolunye uhlangothi, lapho kusikwa izinhlayiya ezinhle, i-amplitude encane kanye nemvamisa ephezulu kufanele igcinwe.
3. Ubude nobubanzi besikrini esidlidlizayo
Lapho ezinye izimo zokuhlola zifana, umkhiqizo ikakhulukazi uncike kububanzi bendawo yesikrini, futhi ukusebenza kahle kokuhlola kunqunywa ikakhulukazi ubude besikrini. Kepha akusho ukuthi ububanzi bendawo yesikrini bukhulu ngangokunokwenzeka, ngoba lapho ubuso besikrini bukhulu kakhulu, ukuphakelwa kuzobe kungalingani futhi ukuqina kuzoba kubi. Ubuso besikrini bude kakhulu futhi abungeke bukhuphule ukusebenza kokuhlolwa, ngakho-ke kufanele kukhethwe indawo yesikrini yobude nobubanzi obufanele. Ngakho-ke, isilinganiso sesici ngokuvamile siyi-2: 3. Okokuhlolisiswa kwezinto ezimahhadlahhadla, ubude bendawo yesikrini bungu-3.5 ~ 4m. Okokuhlolwa kwezinto ezisemkhatsini nezinemibala emihle, ubude bendawo yesikrini bungu-5 ~ 6m; ubuso besikrini obuhlolwe ngaphambilini bungaba bufushane kunobuso bokugcina besikrini Kufanele bube bude.
4. Ukuphonsa i-angle yesikrini esidlidlizayo
I-engeli yokuphonsa yesikrini esidlidlizelayo isho i-engeli eyakhiwe phakathi kokuqondiswa komzimba webhokisi nendawo yesikrini lapho ibhokisi lihamba, okungukuthi, i-engeli yokuqondisa leyo nto ebusweni besikrini iphonswa ngamandla. Uma inkulu i-engeli yokujikijela, isivinini sokuhamba kokuhamba kancane kwezinto, esizoboniswa ngokwanele, esifanele izinto zokwakha okunzima ukuskena. Okuncane kwe-engeli yokuqagela, ijubane lokunyakaza kwezinto, liyashesha, elilungele izinto ezilula ukuskena.
Ukukhethwa nokubalwa kwamapharamitha wesikrini esidlidlizayo
1. Inkomba yokuphonsa
Ngokwesipiliyoni, kuya ngohlobo lwezinto ezizocutshungulwa, inkolelo-mbono kanye nomkhuba wokukhiqizwa kwe-sieving kufakazele ukuthi usayizi wezinhlayiyana ungaphansi kuka-3/4 wosayizi wemesh, obizwa nge- “sieve elula”; usayizi wezinhlayiyana mkhulu kunosayizi wemesh 3/4, obizwa ngokuthi “kunzima ukusika ama-granules”; ukusondela kobubanzi be-granules kusayizi we-sieve, kulukhuni kakhulu ukungena kusihlungo. Iningi lisebenzisa inkomba yokujikijela ngejubane eliphakathi 1.75-3.3.
2. Ukuthambekela kokufaka
I-angle yokuthambekela kokufaka ihlobene namandla wokucubungula nokusebenza kahle kokuhlola kwesikrini esidlidlizayo.
(1) Ukuhlukaniswa kwezinto nokuhlukaniswa, njll.: Ukufaka i-engeli = 0 °;
(2) Isikrini sokudlikiza komugqa: ukuchelela: ukufakwa kwe-engeli = 0 °, kubi uma kunesidingo; lapho okokusebenza kungaphezu kwama-50 mm, i-angle yokufaka = 5 ~ 10 °; lapho okokusebenza kungaphansi kwama-40 mm: i-angle yokufaka = 0 °; Okodaka, ukususwa kwangaphakathi, nokoma emzimbeni: I-angle yokufaka = -5 ° ~ 0 °.
3. Ukufakwa kwe-angle direction angle
Inani lesikrini sokudlidliza komugqa liyi-30 ~ 60 °, yesikrini sokudlidliza komugqa, ngokuvamile β = 45 °. Isizathu ukuthi sinokuguquguquka okuhle, isivinini sokuhamba okuphezulu nokukhiqiza okuphezulu.
4. Ubude nobubanzi bendawo yesikrini
Bala indawo edingekayo ngokusho kokukhiqizwa kwangempela kwesisefo, umkhiqizo, nosayizi wezinhlayiyana zento ezohlolwa. Uma kuyisikrini esinezendlalelo eziningi, kufanele kubalwe ungqimba ngongqimba, futhi inani eliphakeme elibaliwe kufanele lithathwe, futhi kufanele lihanjiswe ngokuya ngezinga.
(1) Ubude bendawo yesikrini: ngaphansi kuka-3.6mm, isikhawu sesigaba ngasinye singu-0.6m; ngenhla kuka-3.6mm, isikhawu sesigaba ngasinye singu-0.9m;
(2) Ububanzi besikrini: ngaphansi kuka-3.0mm, isikhawu sesinyathelo ngasinye singu-0.3m; ngenhla kuka-3.0mm, isikhawu sesinyathelo ngasinye singu-0.6m.
5. Vibration sitsheke engela
I-engeli yokuthambekela kokudlidliza imvamisa ingu-45 °, kanti i-engeli enyakazayo ingafinyelela kuma-60 ° kwezinye izinto ezilukhuni ezifana namatshe agayiwe, i-coke, ne-sinter.
6. Ijubane elihambayo lobuso besikrini nobukhulu besendlalelo sezinto
Ijubane elihambayo lezinto eduze kwesikrini imvamisa liyi-0.12 ~ 0.4m / s, hhayi ngaphezulu kwe-1.2m / s. Okwesikrini esiyindilinga esiyindilinga, ijubane elihambayo lezinto eduze kwesikrini lihlobene ne-angle yokuthambekela kobuso besikrini. Ubudlelwano phakathi kobukhulu δ besendlalelo sezinto nosayizi wesihlungo u-a siboniswa ngakwesokudla: δ≤ (3 ~ 4) a; ubudlelwane obuphakathi kobukhulu nobukhulu bezinhlayiyana d0 zento esesikrinini buyakhonjiswa ngakwesokudla: δ≈ (2 ~ 2.5) d0.
7. Isixwa amplitude yesikrini nejubane lokuphotha
Ukuphakama ngokuvamile kuphakathi kuka-2 ~ 8mm. Lapho isihlungo sincane noma sisetshenziselwa ukoma, thatha inani elincane. Lapho imbobo yesisefo inkulu, khetha inani elikhudlwana. Ngejubane lokuphotha, kungabalwa ngokulandelayo:
A yi-amplitude (mm); n isivinini sokuphotha (n / min)
Okuqukethwe okungenhla kufingqa ukuthi yiziphi izinqubo zenqubo yesikrini esidlidlizelayo, njengokuthambekela kobuso besikrini, ukuphakama nobuningi, ubude nobubanzi bendawo yesikrini, njll. Isikrini esidlidlizayo sithola umphumela omuhle wokusebenzisa.